AMISOM oo sheegay in ay fureen baaris ku saabsan dilkii Almas Elman - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaAMISOM oo sheegay in ay fureen baaris ku saabsan dilkii Almas Elman
AMISOM oo sheegay in ay fureen baaris ku saabsan dilkii Almas Elman
November 23, 2019 Puntland Mirror Somalia 0
Marxuumad Almas Elman. [Isha Sawirka: Twitter]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM) ayaa bayaan ay soo saareen Jimcadii ku sheegay in ay fureen baaris ku saabsan dilka looga shaki qabo gabadha Somali-Canadian-ka ahayd taasoo u dhimatay rasaas ku haleeshay meel u dhow xarunta saldhiga Xalane Arbacadii.
Bayaanka ayaa AMISOM ku sheegeen in ay bilaabeen baaris hordhac ah oo ku saabsan dilka qalbiga jabka iyo nasiib xumada ah ee Almas Elman Axmed Cali.
“Inta aan la gaarin warbixinta ugu dambeysa, baaritaanka hordhaca ah ayaa muujinaya in rasaas ay ku dhacday Almas, khaas ahaan ma jirto xabad la sheegay in ay ka dhacday saldhiga gudihiisa marka shilku uu dhacay.” Ayaa lagu yiri bayaanka AMISOM.
“AMISOM waxay si wadajir ah u la shaqeyn doontaa dowladda federaalka Soomaaliya, ciidamada ammaanka Soomaaliya iyo haayadaha kale si buuxda baaritaan loogu sameeyo dhacdada, iyadoo natiijada baaritaanka la shaacin doono.” Bayaanka ayaa intaas ku sii daray.
Almas ayaa ahayd gabar uu dhalay Elman Axmed Cali oo ahaa nin ka shaqeeya nabada markii ay dhacday dowladdii dhexe ee Soomaaliya, waxaana Muqdisho ku dishay dablay aan la garanayn sanadkii 1996.
Waxay kamid ahayd saddex gabdhood oo uu ka tagay oo ay kamidtahay Ilwad Elman oo sanadkan ku jirta dadka lagu soo daray liiska abaalmarinta Nopel Peace Prize.
Almas ayaa haysatay dhalashada Canada halkaas oo iyada iyo qoyskeedu ay qaxootinimo ku galeen xilliyadii 90-meeyadii.
Waxay soo noqotay xoghayaha safaarada Soomaaliya ee Kenya balse hadda waxay la taliye u ahayd howlgalka Midowga Yurub ee Soomaaliya, sidoo kale waxay xubin firfircoon ka ahayd haayada Elman oo qoyskeedu ay sameeyeen iyagoo ugu magacdaray aabahood, haayada oo fadhigeedu yahay Muqdisho ayaa ka shaqeysa xuquuqda haweenka iyo wacyigelinta caruurta la askareeyo.
Somali government forces capture Tiyeglow town from Al-Shabab
Mogadishu-(Puntland Mirror) Somali government forces backed by AMISOM troops have captured Tiyeglow town in Bakol region of southern Somalia on Monday, sources say. The sources say that the joint forces took control of Tiyeglow without [...]
Nairobi-(Puntland Mirror) Haayada dhaqaatiirta aan xuduuda lahayn ayaa shalay oo Jimce ahayd sheegtay in ay qorsheynayso in ay ku noqoto Soomaaliya, in ka badan saddex sanno oo ay joojisay holwgaladeedii Soomaaliya. Haayada gurmadka caafimaadka oo [...]